မော်ဒယ်နံပါတ်- တရုတ်မှထုတ်လုပ်သည့် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု Y81 စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ် အပိုင်းအစ သတ္တုစာနယ်ဇင်း အလူမီနီယမ် ညှပ်စက်
Y81 Series ဟိုက်ဒရောလစ် သတ္တုဗလာ သည် အပိတ် extruded တည်ဆောက်ပုံ၊ ခိုင်ခံ့မှု မြင့်မားသော ၀တ်စားဆင်ယင်မှု ပြားများ နှင့် ဖြတ်တောက်ထားသော ဓါးသွားများပါသော တံခါးအဖုံးများ ၊ ကြီးမားသော အပိုင်းအစများကို သေးငယ်စေရန် ဖြတ်တောက်နိုင်သည့်အပြင် ကြိုတင် ဖြည့်တင်းမှုကိုလည်း ရရှိစေပါသည်။ စက်တစ်ခုစီကို ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
မော်ဒယ်နံပါတ်- CBJ စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ် အပိုင်းအစ ဘေလာခွဲသည့်စက်
လုပ်ဆောင်ချက်: ဤ CBJ စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ် အပိုင်းအစ ဘေလီ ဘရိတ်ကာ စက်သည် အမှိုက်ကားများ သို့မဟုတ် သံမဏိ အပိုင်းအစများမှ ထုတ်ယူထားသော ဘေများကို ဖြိုခွဲရန်အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ဘေထုပ်တုံးအတွက် လိုအပ်ချက်များ- အပိုင်းအစ ဘေထုပ်၏ အရွယ်အစား ≤2000mm×800mm×800mm (L×W×H) သိပ်သည်းဆ ≤2.5 တန်/m³.
မော်ဒယ်နံပါတ်- တရုတ်ထုတ်လုပ်သည့် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု WS စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ်အပိုင်းအစ သတ္တုကွန်တိန်နာ ရှပ်စက်
WS Series သည် သံမဏိအညစ်အကြေးများကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှု၊ လုပ်သားစရိတ်များ တိုးမြင့်လာခြင်းနှင့် အရင်းအမြစ်များကို ချွေတာပြီး ထိရောက်မှု တိုးမြင့်လိုသော အော်ပရေတာများ၏ ဆန္ဒများ တိုးပွားလာခြင်းကြောင့် ကွန်တိန်နာ ရိတ်သိမ်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ပါးလွှာသောပစ္စည်း၊ သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အိမ်သုံးအမှိုက် အမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးပြုသည့် ကွန်တိန်နာကို ဖြတ်တောက်ခြင်း။
မော်ဒယ်နံပါတ်- တရုတ်ထုတ်လုပ်သည့် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု YDJ စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ်အပိုင်းအစ သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်း Baler စက်
YDJ စီးရီး သတ္တုသုံး ဖဲချပ် ဗယ်လက်ဆာ စက်၏ အလုပ်လုပ်ပုံ နိယာမ
1. Shear လုပ်ငန်းစဉ်- မော်တာအား ဦးစွာစတင်ပါ၊ ဆီပန့်ကို လှည့်ရန် ဆီပန့်ကို မောင်းနှင်ပါ၊ ထို့နောက် ပစ္စည်းကို မှန်ကန်သောနေရာသို့ ပို့ပေးပါ။ Shear ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ၊ ပစ္စည်းဆလင်ဒါကို နှိပ်ပါ၊ နှင့် Shear cylinder သည် ပစ္စည်းကို နှိပ်ခြင်းနှင့် ရိတ်ခြင်းကို နားလည်ရန် ဆက်တိုက်ရွေ့လျားသည်။ ရိတ်ခြင်းပြီးသောအခါ၊ tool carrier နှင့် press သည် standby အတွက် မူလအခြေအနေသို့ ပြန်သွားပြီး ပထမပိုင်းဖြတ်ခြင်းပြီးသွားပါသည်။
2၊ လည်ပတ်မှုမုဒ်- ခရီးသွားခလုတ် နှစ်လမ်းသွား ကန့်သတ်ချက်ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့်၊ ဖြတ်တောက်မှုနှစ်ခု အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး အလိုအလျောက် လည်ပတ်နိုင်သည်။
မော်ဒယ်နံပါတ်- တရုတ်ထုတ်လုပ်ရေးလက်စွဲထိန်းချုပ်ရေး Q43 စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ်အပိုင်းအစ သတ္တု Alligator Shear စက်
ဟိုက်ဒရောလစ် အပိုင်းအစ သတ္တုငါးသေတ္တာ ရိတ်သိမ်းစက်သည် သတ္တုပြန်လည်ထူထောင်ရေးကုမ္ပဏီများ၊ အပိုင်းအစကြိတ်စက်များ၊ အရည်ကျိုခြင်းနှင့် သွန်းလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် အေးခဲသောအခြေအနေရှိ သံမဏိပုံစံမျိုးစုံနှင့် သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများကို ဖြတ်တောက်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသော မီးဖိုချောင်ကို ဖြတ်တောက်ရန် သင့်လျော်ပါသည်။
မော်ဒယ်နံပါတ်- တရုတ်ထုတ်လုပ်သည့် လက်စွဲထိန်းချုပ်ရေး Y82 စီးရီး ဒေါင်လိုက် ဟိုက်ဒရောလစ် သတ္တုမဟုတ်သော ဖိလိယက်ခတ်စက်
ဤကဲ့သို့ ဟိုက်ဒရောလစ် ဒေါင်လိုက် သတ္တုမဟုတ်သော ဖိနှပ်စက် အမျိုးအစားကို အမှိုက်စက္ကူ၊ အမှိုက်ပုံးပုံး၊ စွန့်ပစ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ပုလင်းများ၊ စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်၊ ဖလင်၊ အဝတ်အထည်၊ သိုးမွှေးနှင့် အခြားသော ပေါ့ပါးသော သတ္တုအချို့ကို နှိပ်ရန်အတွက် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။
မော်ဒယ်နံပါတ်- တရုတ်ထုတ်လုပ်သည့် Q91Y စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ် သတ္တုအပိုင်းအစ အကြီးစား ကောက်ရိတ်စက်
Q91Y စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ် အကြီးစား အပိုင်းအစ သတ္တုရိတ်စက်၊ ၎င်းသည် ဘားများနှင့် ပရိုဖိုင် အမျိုးမျိုးကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် သတ္တုအပိုင်းအစ အများအပြားကို အတူတကွ ဖိသိပ်ထားကာ၊ ရှည်လျားသော ဘလောက်တစ်ခုထဲသို့၊ အပေါ့စား သံမဏိအပိုင်းအစများကို တစ်တုံးထဲသို့ ထုပ်ပိုးထားကာ၊ အမှိုက်ကားကို ကားဖိတုံးထဲသို့ ဖောက်ထည့်နိုင်သည်။ . shearing function အပြင်။
အပိုင်းအစ သတ္တုကြိတ်စက်, Pop-Top Can Baler ကိရိယာ, Leaf Compactor နှင့် Baler, Y81 ဟိုက်ဒရောလစ် Baler, အိမ်လုပ်ကတ်ထူပြားဖဲချပ်, Aluminum Foil Baler စက်,